स्वास्थ्य – Page2– shubhabihani
टेकु अस्पतालमा उपचाररत महिलामा स्क्रब टाइफस पुष्टि के हो स्क्रब टाइफस ? कसरी बच्ने ?
२६ जेठ, काठमाडौं । टेकस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत एक व्यक्तिमा स्क्रब टाइफस भएको पुष्टि भएको छ ।
बाराको गढीमाई नगरपालिका-१६ बस्ने अन्दाजी ३५ वर्षकी एक महिलामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण देखिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका कन्सल्टण्ट फिजिसियन डा. अनुप बास्तोलाले बताए । उनले यो केस यस वर्षकै पहिलो भएको बताए ।
विगत ९-१० दिनदेखि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जोर्नी तथा मांसपेसी दुख्ने समस्या भएपछि ती महिलालाई सुुरुमा टाइफाइडको उपचार गरिएको थियो । विभिन्न उपचार गर्दा पनि रोग निको नभएपछि उनलाई गत शुक्रवार टेकु अस्पताल ल्याइएको थियो ।
‘लक्षणका आधारमा रगत परीक्षण गर्दा उनमा स्क्रब टाइफसको देखिएको हो’, डा. बास्तोलाले भने ।
आइजीएम अलाइजा नामक रक्त परीक्षण गर्दा उनमा स्क्रब टाइफस भएको पाइएको थियो । उपचार पश्चात्त उक्त महिलाको अवस्थामा सुधार आएको र अबको एक/दुई दिनमै उनलाई डिस्चार्ज गरिने डा. बास्तोलाले बताए ।
डा. बास्तोलाका अनुसार अगष्टदेखि नोभेम्बरसम्म नेपालमा स्क्रब टाइफसका विरामी ज्यादा देखिने गर्छन् । तर यो वर्ष सिजन अगावै यसका विरामी देखा परेको उनले बताए ।
यो रोग ‘रिकेटसिया’ नामक व्याक्टेरियाका कारण मानिसमा सर्ने गर्छ । यो रोग मुसा, छुचुन्द्रोमा पाइने ‘माइट’ भनिने किर्नाले मानिसमा सार्ने काम गर्छ । यस्ता किर्ना विशेषगरी झार, चौर, घासपात, पुराना काठहरुमा बस्छन् । व्याक्टेरिया मुसाबाट मानिसमा सरेपछि स्वस्थ मानिसहरु समेत यसबाट संक्रमित बन्छन् । यो रोग पहिला पनि थियो । तर पनि नेपालमा यसको असरबारे खासै चर्चा भएको थिएन ।
महाभूकम्पका कारण मानिसहरु सडक किनार वा खुल्ला चौरमा बस्न थालेपछि यसको संक्रमण बढी देखिन थालेको हो । नेपालमा महाभूकम्प लगत्तै देखा परेको स्क्रब टाइफसकै कारण आठ जनाले ज्यान समेत गुमाएका छन् ।
निरन्तर ज्वरो आउने यसको मुख्य लक्षण हो । ज्वरोसँगै टाउको दुख्ने, पसिना आउने, थकाई लाग्ने, कमजोर महसुस हुने, खोकी लाग्ने, आँखा वरिपरि दुख्ने, घाँटी वरिपरिका ग्रन्थीहरु सुन्निएर गिर्खा पर्ने लगायतका लक्षण पनि देखिन्छन् । यस्ता लक्षण देखापरेको पाँचौ दिनदेखि सातौ दिनमा घाँटी वरिपरि रातो विमिरा देखिने गर्छ, जुन क्रमशः पेट, हात, खुट्टा तथा अनुहारमा फैलिन्छ ।
यो रोगको सुरुमै उपचार नगरिए ज्यान समेत जान सक्छ । विशेषगरी सास फेर्न गार्‍हो हुने, कलेजो तथा मृगौलाले काम गर्न छोड्ने र अन्त्यमा दिमागमा समेत असर गरेर विरामीको मृत्यु हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यस रोगको उपचार विधि ?
यदि कुनै विरामीमा माथिका कुनै पनि लक्षण देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लगेर उपचार गराइहाल्नु पर्छ । विशेषगरी रगतमा एन्टिजेनको जाँच गरेपछि यो रोग लागेको वा नलागेको पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
यदि विरामीमा यस रोगको संक्रमण देखिएमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार पुरा डोजको एन्टिवायोटिक औषधि प्रयोग गरेमा यो रोग निको हुन्छ । यो रोगमा डोक्सिसिलिन र एजिथ्रोमाइसिन नामक औषधिको प्रयोग प्रभावकारी मानिने डा. बास्तोला बताउँछन् ।
खेतबारीमा काम गर्ने किसान, झाडी र घाँसमा खेल्ने बच्चाहरुमा यो रोग सर्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले समयमै सजग रहन जरुरी हुन्छ । त्यस्तै रोग लागेको शंका लागेमा तुरुन्तै अस्पताल जानु उचित हुन्छ । त्यस्तै, यो रोग फैलाउन सक्ने, किरा, मुसा, छुचुन्द्रो वरिपरि देखिएमा किटनाशक औषधि प्रयोग गरी भगाउनु वा नष्ट गर्नु उचित मानिन्छ ।
उखुको रस खाँदा के–के छन् फाइदा ?
काठमाडौं । आइरन र कार्बोहाइडेटको मात्रा प्रचुर मात्रामा पाइने भएकोले यसले शरीरलाई तुरुन्त शक्ति र स्फूर्ती प्रदान गर्दछ ।
उखुमा धेरै मात्रामा खनिज पदार्थ एवं अर्गानिक अम्लहरू पाइन्छ । जसले औषधिको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
उखुको रस पेट, हृदय, मस्तिष्क एवं आँखका लागि एकदमै फाइएदाजनक छ । उखुको रस सँधै ताजा र छानिएको मात्र पिउनु पर्छ ।
उखुको रस रुघाखोकी लागेमा यसको प्रयोग गरेमा तुरुन्त निको हुन्छ । ग्याष्ट्रिक (ग्यासराइटिस) भएको अवस्थामा यसको रस पिएमा पेटमा हुने जलन निको हुन्छ । उखुको रस कागतीको रससँग मिलाएर खाएमा जण्डिस रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
दुब्लो पातलोृ व्यक्तिहरूका लागि यसको रस एकदमै फाइदाजनक छ । उखुलाई दाँतले चुसेर खानाले कमजोर दाँत बलियो हुन जान्छ । – एजेन्सीको सहयोगमा
यी अंगबिना पनि हामी सजिलै बाँच्न सक्छौं
हाम्रो शरीरमा विभिन्न भागहरु हुन्छन् । शरीरका प्रत्येक भागहरुले गर्ने काम पनि फरक फरक हुन्छ । यी मध्ये केही भागहरु यस्ता हुन्छन्, जुन शरीरबाट निकालेपछि पनि हामी सजिलै बाँच्न सक्छौ । शरीरका यस्ता १० भागहरुको बारेमा थाहा पाइराख्नुस्, जुन हाम्रो शरीरबाट निकाली सकेपछि पनि हामी बाँच्न सक्छौ ।
१ पिट्युटरी ग्ल्याण्ड-हाम्रो मस्तिष्कको तल्लो भागमा पिट्युटरी ग्ल्याण्ड रहेको हुन्छ । ब्रेन ट्युमर भयो भने पिट्युटरी ग्ल्याण्ड सहित अप्रेशन गरेर निकालिन्छ । यो बिना हामी बाँच्न सक्छौ ।
२. टन्सिल- यो मुखभित्र बंगारा नजिकै रहेको हुन्छ । यदि यसको कारण मुखमा इन्फेक्सन भयो भने टन्सिललाई शरीरबाट अलग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले शरीरलाई कुनै असर गर्दैन ।
३. पाठ्यघर- पाठ्यघरको क्यान्सर लागेमा यसलाई अप्रेसन गरेर फालिन्छ । पाठ्यघर विना पनि महिला सजिलै बाँचिरहेका हुन्छन् ।
४.किड्नी -हाम्रो शरीरको लागि किड्नी एकदमै महत्वपुर्ण हुन्छ । शरीरमा रहेका दुईवटा किड्नी मध्ये एउटा किड्नीले काम गर्न छोड्यो भने यसको अप्रेसन गरेर फालिन्छ । यो बिना पनि हामी सजिलै बाँच्न सक्छौ ।
५. थाइर्वाइड ग्ल्याण्ड -थाइर्वाइड ग्ल्याण्डमा ट्युमर, ओभर वा अण्डर एक्टिभ भयो भने थाइर्वाइड ग्ल्याण्ड शरीरबाट निकालिन्छ ।
६. फोक्सो -कुनै गम्भिर रोग तथा क्यान्सर लागेमा फोक्सोको अप्रेसन गरेर निकालिन्छ । यसविना पनि हामी बाँच्न सक्छौ ।
७. ओभरी –महिलाको पाठ्यघरमा हुने ओभरीमा क्यान्सर वा गम्भिर रोग लाग्यो भने अप्रेसन गरेर शरीरबाट निकालिन्छ । र पनि महिलाले सामान्य जिवन बाँचिरहेका हुन्छन् ।
८. इयरलोव्स -यो एउटा मांशपेशी हो । यसले कान हल्लाउनमा मदत गर्दछ । हाम्रो शरीरलाई यसको खासै आवश्यकता पर्दैन ।
९. एपेन्डिक्स -यो हाम्रो शरीरभित्र रहेको ठुलो आन्द्रा हो । पत्थरी तथा अल्सर जस्ता रोग लागेमा यसलाई हाम्रो शरीरबाट निकालिन्छ । यो बिना पनि हामी सामान्य रुपमा बाँच्न सक्छौ ।
१०. साइनस यो हाम्रो शरिरमा खासै महत्वपुर्ण मानिदैन । साइनसलाई शरिरबाट अलग गरियो भने पनि हामी बाँच्न सक्छौ ।
एजेन्सी । महिला र पुरुषबीच हुने यौन सम्बन्ध र आकर्षणलाई लिएर अहिलेसम्म धेरै प्रकारका अध्ययनहरु भइसकेका छन् । भर्खरै मात्रै एक अध्ययनले दाबी गरेको छ कि महिलालाई यौन सम्बन्ध राख्नका लागि सबैभन्दा बढी शरीरमा ठूला–ठूला टैटू बनाएका पुरुषहरु मन पर्छन् ।
टैटू बनाएका पुरुषसंग महिलाहरु तुरुन्तै आकर्षित हुन्छन् । विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अध्ययननमा सामेल पुरुष र महिला दुबैले यसलाई पुष्टि समेत गरेका छन् । अध्ययनमा करिब अढाई हजार पुरुष र महिलाले आफ्नो विचार राखेका थिए ।
तर, दोस्रो तर्फ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने शरीरमा टैटू बनाउनु राम्रो मानिँदैन । यसबाट छालामा संक्रमण हुने हुने गर्छ । यस्तै एउटै औजार प्रयोग गरेमा प्राणघातक रोग एचाइभी सर्ने खतरा पनि हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यसका साथै यसमा प्रयोग हुने क्यान्सर हुने खतरा पनि बढी हुने गर्छ । अध्ययनमा पनि जुन पुरुषले शरीरमा आकर्षक टैटू बनाएको छ उसैलाई बढी यौनका लागि स्वीकार गर्ने गर्छन् ।
जानिराख्नुस् दश मिनेटमा तौल घटाउने तरिका
मोटाएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? चिन्ता नगर्नुस् अव १० मिनेट मात्र समय लगाएर मोटो पनको समस्या समाधान गर्न सक्नु हुन्छ ।
हालै गरिएको एक शोधले नियमितरुपमा १० मिनेट सम्म जाडोमा बसेर काँप्दै क्यालोरी घटाउने हो भने मोटो पन ह्वात्तै घट्ने देखाएको छ ।
युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका शोधकर्ताहरुले चिसो ठाउँमा अभ्यास गर्दा शरीरमा क्यालोरी बर्न धेरै हुने र ब्राउन फ्याट तयार हुने हुन्छ जसले मोटो पन घटाउन सहयोग गर्छ ।
बैज्ञानिकहरुका अनुसार फ्याट २ प्रकारको हुन्छ ह्वाइट फ्याट र ब्राउन फ्याट ह्वाइट फ्याट शरीरलाई उर्जा दिन्छ भने ब्राउन फ्याट क्यालोरी बर्न गर्न सहायक हुन्छ ।
शरीरमा प्रतिदिन ५० ग्राम मात्र ब्राउन फ्याट पैदा गर्न सक्यो भने त्यसले ३०० क्यालोरी कम गर्छ ।
र १५ डिग्री सेल्सियस भन्दा चिसो ठाउँमा १० मिनेट शारीरक अभ्यास गर्दा मोटो पन घटाउन प्रयाप्त हुने ब्राउन फ्याट पैदा गर्न सकिन्छ ।
यस्ता लक्षण देखिएमा थाइराइड जाँच गर्नुपर्छ
थाइराइड भनेको एउटा ग्रन्थी हो । यो घाँटीको अघिल्लो भागमा रुद्रघण्टीको तल रहेको हुन्छ । यो ग्रन्थीले थाइरोक्सिन (टी–३) र ट्राइआयोडो थाइरोनीन (टी–४) हर्मोन उत्पादन गर्छ । थाइराइडको खास काम भनेको शरीरको गति नियन्त्रण (मेटाबोलिजम) गर्ने हो । थाइराइड ग्रन्थीको काममा गडबडी भएमा यसले अनावश्यक हर्मोन बढी र आवश्यक हर्मोन कम मात्रामा उत्पादन गर्छ । हर्मोन बढी उत्पादन हुनुलाई हाइपर थाइरोइडिज्म् भनिन्छ भने कम हर्मोन उत्पादन गर्ने कामलाई हाइपो थाइरोडिज्म् भनिन्छ ।
धेरै मोटाउने वा दुब्लाउने भएमा
धेरै जाडो वा गर्मि महशुस भएमा
मुटुको धड्कन छिटो छिटो भएमा
कब्जियत हुने वा धेरै दिशा लाग्ने भएमा
महिनावारी गडबड भएमा
काम गर्न गाह्रो वा अल्छी लाग्ने भएमा
कपाल धेरै झरेमा
छाला सुख्खा हुने र नङ भाचिने भएमा
आँखा हेर्न असजिलो भएमा
शरीरको तापक्रम बढ्ने
भोक बढी लाग्ने तर दुब्लाउने
मानसिक तनाव बढी हुने
गर्भ रोक्न पुरुषको लागि सुरक्षित अनि प्रभावकारी इन्जेक्सन तयार
१३ कात्तिक, एजेन्सी।
अमेरिकी वैज्ञानिकले पुरुषको लागि सुरक्षित अनि प्रभावकारी इन्जेक्सन तयार गरेका छन् जसले शुक्राणुलाई निष्क्रिय गर्छ।
वैज्ञानिकका अनुसार यो इन्जेक्सनलाई करिब २७० पुरुषमा परीक्षण गरिएको छ। इन्जेक्सन ९६ प्रतिशत प्रभावकारी पाइएको छ।
इन्जेक्सन लगाएपछि जो मानिसमा साइड इफेक्ट देखियो सो निकै न्युन संङ्ख्यामा देखियो। इन्जेक्सन पश्चात कसैमा दुखाइ त कसैको मुड बिग्रिएको मात्र बताइन्छ।
वैज्ञानिकहरु करिब २० वर्ष देखि पुरुषको लागि एक प्रभावकारी हर्मोन गर्भनिरोधक तयार गर्नको लागि अनुसन्धान गर्दै थिए।
अनुसन्धानको क्रममा शुक्राणु बन्न रोक्ने तरिकाको खोजी गरिदैँ थियो। साथै सो तरिकाले कुनै अप्रत्यक्ष असर नगरोस् भनी अनुसन्धान गरिएको थियो।
पुरुषमा शुक्राणु निरन्तर बनिरहेको हुन्छ। पुरुषमा शुक्राणु करिब १.५ करोड प्रति मिलीलिटर हुन्छ। यदि यसलाई १० लाख प्रति मिलीलिटरमा झार्न चाहने हो भने उच्च स्तरको हर्मोनको आवश्यकता पर्छ।
यो अध्ययन क्लिनिकल एन्डोक्रिनोलोजी एन्ड मेटाबबोलिज्म नामको पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ।
यो अध्ययन १८ देखि ४५ वर्षका यस्ता पुरुषमा गरिएको थियो जसको कमसेकम एक वर्ष सम्म महिलासाथीसंग सम्बन्ध रह्यो। अध्ययनको लागि ती महिलाहरुलाई पनि सहमतिमा लिइएको थियो।
अध्ययनको सुरुवातमा पुरुषको शुक्राणुको सङ्ख्या जाँचियो, जसले थाहा पाइयोस् कि ती सामान्य सङ्ख्यामा छन्।
अनि आठ हप्ताको अन्तरालमा हर्मोनको दुई इन्जेक्सन दिइयो। अनि हरेक छ महिना परीक्षण गरिदैँ हेरियो, तबसम्म शुक्राणुको सङ्ख्या १० लाख भन्दा तल आइपुग्यो।
मोटाएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? त्यसो भए तौल घटाउन अब यस्तो किसिमले प्रयोग गर्नुहोस लसुन